David Takayoshi Suzuki CC OBC FRSC (wuxuu dhashay 24-kii March, 1936) waa akadeemiyadda Canadian-ka, cilmiga sayniska iyo dhaqdhaqaaqa deegaanka. Suzuki waxay heshay Ph.D. joolajiyadii Jaamacadda Chicago ee 1961-dii, wuxuu ahaa professor ee qaybta hidaha ee Jaamacadda British Columbia laga soo bilaabo 1963 ilaa uu ka fariistay 2001-kii. Tan iyo bartamihii 1970-meeyadii, Suzuki waxaa loo yaqaanay telefishankiisa iyo raadiyihiisa, iyo buugaag ku saabsan dabeecadda iyo deegaanka. Wuxuu si fiican u yaqaanaa marti-geliyaha barnaamijka sayniska CBC-ga ee caanka ah iyo kuwa dheerba ee loo yaqaan 'Nature of Things', oo laga arkay in ka badan 40 dal. Wuxuu sidoo kale caan ku yahay in lagu naqdiyo dawladaha ficil la'aanta ah si ay u ilaaliyaan deegaanka.
Suzuki oo muddo dheer ka shaqaynayay isbedelka cimilada adduunka, Suzuki wuxuu aasaasay Ururka Suxuumada David Suzuki 1990-kii, si uu u shaqeeyo "si loo helo habab bulsheed loogu dheelitirayo aduunyada dabiiciga ah ee nagu haya". Muhiimadda Aasaaska waa: oceansiinta iyo kalluumeysiga waari kara, isbeddelka cimilada iyo tamarta nadiifka ah, waaritaanka, iyo tartanka dabiiciga ah ee Suzuki. Foundation wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa siyaabo lagu caawiyo ilaalinta baddaha badda shidaal waaweyn sida saliidda Mexico ee Gacanka Mexico.  Suzuki wuxuu sidoo kale ahaa agaasime ka tirsan Ururka Xoriyaadka Madaniga ee Kanadiyaanka laga soo bilaabo 1982-1987.
Suzuki waxaa la siiyay abaalmarinta xaq u lahaanshaha sanadka 2009. Buugiisa 2011, The Legacy wuxuu ku guuleystay abaalmarinta buugaagta Nautilus. Wuxuu yahay saaxiibka amarka Kanada. Sanadkii 2004, David Suzuki wuxuu kaalinta shanaad kaga jiraa liiska ugu sarreeya liiska ugu dambeeyay ee taxanaha telefishanka ee CBC-da oo weydiistay daawadayaasha inay doortaan The Greatest Canadian of all time.avid Suzuki (Vancouver, 24 maarso 1936) waa saynisyahan kanadian.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro David Suzuki.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Suzuki&oldid=186232"
Last edited on 15 Nofeembar 2018, at 20:36